भूकम्प गएको दुई वर्षपछि म्याग्दीका भूकम्पपीडितले बल्ल पाए पहिलो किस्ताबापतको रकम
म्याग्दी, साउन १५
म्याग्दीका भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु चार करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरिएको छ ।
विसं २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्प तथा त्यसपछिका परकम्पले घर पूर्ण क्षति भएका लाभग्राहीहरुको खातामा दुई वर्षपछि पहिलो किस्ता अनुदान वितरण गरिएको हो ।
आठसय ४५ घरपरिवार भूकम्पपीडितलाई रु ५० हजारका दरले रु चार करोड २२ लाख ५० हजार वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत पदम भण्डारीले जानकारी दिए ।
आठसय ६८ घर पूर्ण क्षति भएको तथ्यांक भए पनि वडा कार्यालयमा निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गरेर सिफारिस भई आएकाको मात्र बैंक खातामा रकम जम्मा गरिएको सूचना अधिकृत भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा भूकम्पपीडितको सूचीमा नाम छुटेकाको वडा कार्यालयमार्फत गुनासो संकलन गरी प्रमाणित गर्न दोस्रो चरणमा स्थलगत सर्वेक्षणका लागि प्राविधिक टोली खटाइने भएको छ ।
गत वैशाख १२ गतेअघि नै कम प्रभावित जिल्लाका भूकम्पपीडितको खातामा पनि पहिलो किस्ताबापतको रकम जम्मा गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको लक्ष्य रहे पनि अनुदान सम्झौता समयमै नहुनु र स्थानीय तहको चुनावका कारण ढिलाइ भएको हो ।
लाभग्राहीसँग गरिएको सम्झौताका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पीडितको बैंक खातामा चार चरणमा रु तीन लाख जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता पाउन लाभग्राहीले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको भवन निर्माण र प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने छ ।
जग हालेपछि दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार, छाना छाउनुअघि तेस्रो किस्ताबापत रु ७५ हजार र शौचालय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थाका लागि रु २५ हजार अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन भवन तोकिएको मापदण्डअनुसारको भएको प्राविधिकबाट प्रमाणित र सिफारिस गराउनुपर्नेछ ।
अनुदान रकम पाएपछि चर्किएको, भत्किएको घर मर्मत गरेर बस्दै आएका भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनःनिर्माणको तयारी गरेका छन् । अनुदान वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि कतिपयले आफ्नै तरिकाले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् । रासस
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १५, २०७४, १२:३४:४०
अस्पताललाई युद्धभूमि बनाएर अपहरण शैलीमा मलाई काठमाडौं ल्याइयो- डा. केसी
तस्बिरमा हेर्नुहोस् डाक्टर केसीको जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म
सत्याग्रहीमाथि सत्ताको लाठी
डा. केसीलाई लिएर सेनाको हेलिकप्टर जुम्लाबाट उड्यो
अस्पताल तोडफोड भएपछि सरकारी हेलिकप्टर चढेर म जान्नः डा. केसी
डाक्टर केसी टिचिङ अस्पतालमा
टुँडिखेलमा ओह्रालेर डाक्टर केसीलाई टिचिङ अस्पताल लगियो
डाक्टर केसीको हेलिकप्टर तेल भर्न सुर्खेतमा
कमैया मुक्तिका १९ वर्ष ‘ हर्ष न विस्मात्’
तेस्रो कलेजो प्रत्यारोपण सफल,खड्काले नयाँ जीवन पाए
राज्य पुनरसंरचनामा निजामती र सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने केही कार्यहरू शिखर चपाई